လော ဘ ကြီးပြီး နိုင်ငံတိုင်းအပေါ် ကလိန် ကျမှု ကြောင့် မကြာ ခင် ပြို ဆင်း တော့ မယ့် မဟာ တံတိုင်း ကြီး – GuGuGarGar
Shwe | August 21, 2020 | World News | No Comments
လွန်လေ ပီးေ သာ နောင်တ လက် တွေ့ကျမှ သိကြ ပီပေါ့… ပြောလိုက် တဲ့ စကား အရှက်တရား ဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှာရမှ န်းမသိ…တောင်းပန်တာ တောင် မှ အသားယူပြောတ တ်တဲ့ လူစား မျိူးတွေဘဲ….
ဘာတဲ့. မိမိနိူင်ငံဟာ သူတပါး အပေါ် တစ်လက်မမှ ကျူးကျော်ခြင်း မရှိပါဘူး….နိူင်ငံကြီး ပီပီ စောင့်ထိန်း ရမဲ့ ဥပဒေ ကို တိတိကျကျ.လိုက်နာဆောင် ရွက်နေပီး အရိုးသားဆုံး ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွှက်နေတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဦးဆုံးနိူင်ငံဖြစ် တယ် ဆို ပါလား….
အမေရိကန်နိူင်ငံနှင့် ဘယ်လို အကြောင်းအရာ မဆိုဆွေးနွေး ညှိနိူင်း ပီးတော့ လုပ်ဆောင်မဲ့နိူင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပီး.စားပွဲဝိုင်းမှာအ​ဖြေရှာလို့ရတဲ့ ကိစ္စရပ်ဖြစ်တယ် ဆိုပီးပြောလာတဲ့ နဂါးကြီး ဆို ပါတော့…
ဒဲ့သာပြောလိုက် ပါကွာ.စစ်မတိုက် ပါနှင့် ခင်ဗျားတို့ လိုချင်တာအကုန်လုံး လိုက်လျောပါ့မယ် လို့.ကျူပ်တို့ အစိုးရကိုဘဲ တရုတ်နိူင်ငံ မှာထားခဲ့ပေးပါဆိုပီးတော့
ဆရာ တပည့်တွေတစ်လေသံဘဲ ထွှက်ကြ တယ်ဆိုတာ ခုတော့သိလိုက် ရပါ့…လက်စသတ်တော့ ဆရာနောက်ကို တစ်ထေရာတည်းလိုက်နေကြတာကိုး….(ဒါကတော့ဘ ယ်သူတွေ ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်)
ကမ္ဘာကိုပတ်.စီးပွားမြတ်ရင် ပီးရောဆိုတဲ့ လောဘ..အတ္တ အမှောင်ဖုံးကျဆုံးချိန်တန်ခဲ့ပီပေါ့.ရသမျှ အကုန်ယူ.ဇတ်တူတောင် မချန်ဘူး….ကြီးလိုက်တဲ့ လောဘ.တစ်ကမ္ဘာလုံး မကသိမ်းချင်…. ဟန်ရေးတပြင်ပြင်.ချဲ့ထွင်လာခဲ့ တာကြာပီပေါ့…ခံလိုက်ရတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီး.ခံလိုက်ရတဲ့လူသားတွှေ.အငြိုးပြေကြပါတော့မလား…စိတ်ထဲမှာ ထင်တိုင်းကြဲ.အာဏာစွဲ ကရှိနေတာ ကိုးဗျ.
ထရမ့်ကတော့ မင်းပြောတဲ့စကားတွေက ငါကိုဘဲ မရိုးသားတဲ့နိူင်ငံ လိုလိုစောင်းကာ အော်နေတာလားဟ ဆိုပီးပိုလို့ဒေါသနိူးဆွှပေးလိုက်တာအတူတူပါဘဲ…. ခုတော့ အချိန်နှောင်းခဲ့ ပီ ဆိုပါတော့.ရပ်တည်နိူင်ရေး တရုတ်တစ်ပြည်လုံးပေးရင်တောင်ကျေနပ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး အကြောင်းကို သိ.ခံလာရအကြိမ်ကြိမ်ရှိ ခဲ့ကြပီဆိုတော့လေ…
တစ်ချိန်က မဟာတံတိုင်းကြီး.ခုတော့ပြိုဆင်း.မြေတလင်းပေါ်ရောက်ခါနီးပီပေါ့မကြာမှီ.အတောင်ပံများ စွာ.လင်းယုန်ကြီးဟာ ပျံသန်းပြပါ လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကို မယုံမရှိလေနှင့်… နေမိုး..တောင်ပိုင်းသား
လှနျလေ ပီးေ သာ နောငျတ လကျ တှကေ့မြှ သိကွ ပီပေါ့… ပွောလိုကျ တဲ့ စကား အရှကျတရား ဆိုတာ ဘယျမှာ ရှာရမှ နျးမသိ…တောငျးပနျတာ တောငျ မှ အသားယူပွောတ တျတဲ့ လူစား မြိူးတှဘေဲ….
ဘာတဲ့. မိမိနိူငျငံဟာ သူတပါး အပျေါ တဈလကျမမှ ကြူးကြျောခွငျး မရှိပါဘူး….နိူငျငံကွီး ပီပီ စောငျ့ထိနျး ရမဲ့ ဥပဒေ ကို တိတိကကြ.လိုကျနာဆောငျ ရှကျနပေီး အရိုးသားဆုံး ပှငျ့ပှငျ့ လငျးလငျး လုပျကိုငျ ဆောငျရှကျနတေဲ့ ကမ်ဘာပျေါမှာ ပထမဦးဆုံးနိူငျငံဖွဈ တယျ ဆို ပါလား….
အမရေိကနျနိူငျငံနှငျ့ ဘယျလို အကွောငျးအရာ မဆိုဆှေးနှေး ညှိနိူငျး ပီးတော့ လုပျဆောငျမဲ့နိူငျငံတဈခုဖွဈပီး.စားပှဲဝိုငျးမှာအဖွရှောလို့ရတဲ့ ကိစ်စရပျဖွဈတယျ ဆိုပီးပွောလာတဲ့ နဂါးကွီး ဆို ပါတော့…
ဒဲ့သာပွောလိုကျ ပါကှာ.စဈမတိုကျ ပါနှငျ့ ခငျဗြားတို့လိုခငျြတာအကုနျလုံး လိုကျလြောပါ့မယျ လို့.ကြူပျတို့အစိုးရကိုဘဲ တရုတျနိူငျငံ မှာထားခဲ့ပေးပါဆိုပီးတော့
ဆရာ တပညျ့တှတေဈလသေံဘဲ ထှကျကွ တယျဆိုတာ ခုတော့သိလိုကျ ရပါ့…လကျစသတျတော့ ဆရာနောကျကို တဈထရောတညျးလိုကျနကွေတာကိုး….(ဒါကတော့ဘ ယျသူတှေ ဆိုတာ လူတိုငျးသိပါတယျ)
ကမ်ဘာကိုပတျ.စီးပှားမွတျရငျ ပီးရောဆိုတဲ့ လောဘ..အတ်တ အမှောငျဖုံးကဆြုံးခြိနျတနျခဲ့ပီပေါ့.ရသမြှ အကုနျယူ.ဇတျတူတောငျ မခနျြဘူး….ကွီးလိုကျတဲ့ လောဘ.တဈကမ်ဘာလုံး မကသိမျးခငျြ…. ဟနျရေးတပွငျပွငျ.ခြဲ့ထှငျလာခဲ့ တာကွာပီပေါ့…ခံလိုကျရတဲ့ ကမ်ဘာမွကွေီး.ခံလိုကျရတဲ့လူသားတှေ.အငွိုးပွကွေပါတော့မလား…စိတျထဲမှာ ထငျတိုငျးကွဲ.အာဏာစှဲ ကရှိနတော ကိုးဗြ.
ထရမျ့ကတော့ မငျးပွောတဲ့စကားတှကေ ငါကိုဘဲ မရိုးသားတဲ့နိူငျငံ လိုလိုစောငျးကာ အျောနတောလားဟ ဆိုပီးပိုလို့ဒေါသနိူးဆှပေးလိုကျတာအတူတူပါဘဲ…. ခုတော့ အခြိနျနှောငျးခဲ့ ပီ ဆိုပါတော့.ရပျတညျနိူငျရေး တရုတျတဈပွညျလုံးပေးရငျတောငျကနြေပျကွမှာ မဟုတျဘူး အကွောငျးကို သိ.ခံလာရအကွိမျကွိမျရှိ ခဲ့ကွပီဆိုတော့လေ…
တဈခြိနျက မဟာတံတိုငျးကွီး.ခုတော့ပွိုဆငျး.မွတေလငျးပျေါရောကျခါနီးပီပေါ့မကွာမှီ.အတောငျပံမြား စှာ.လငျးယုနျကွီးဟာ ပြံသနျးပွပါ လိမျ့မယျဆိုတာ ကို မယုံမရှိလနှေငျ့… နမေိုး..တောငျပိုငျးသား